Luca's Farmhouse Brezza Apartment - I-Airbnb
Pescina, Tuscany, i-Italy
Isakhiwo sasendulo sabalimi esaqala ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye, esakhiwe ngamatshe ngokuphelele futhi savuselelwa sishiya izici zezakhiwo zendawo ziqinile, sakha idolobhana elincane elinamafulethi amane, enemibhede eyi-14-20, ene-sauna, i-whirlpool, eshisayo. ubhavu kanye nedamu lokubhukuda elincane. Ukuqashwa kwesikhathi eside nakho kuyatholakala.
Ifulethi iBrezza lakhiwe igumbi lokuhlala, elinendawo yasebusuku enombhede usofa, ikhishi elilodwa negumbi lokugezela elilodwa esitezi esiphansi, amagumbi okulala amabili, igumbi lokuphumula elincane kanye negumbi lokugezela esitezi esingaphezulu.
Amanye amafulethi yilawa: Petra, Fonte Ciliegio kanye neBrezza. Kukhona ukuxhumana kwe-WiFi ngaphakathi kwendlu nasengadini. Izilwane ezincane neziphakathi zamukelekile. Ipulazi litholakala kumakhilomitha ambalwa ukusuka ezindaweni zokugeza ezishisayo zase-S. Filippo, e-Bagni Vignoni, kanti ezinye ezimbalwa zingafinyelelwa ezindaweni zokugeza ezishisayo zasePetriolo, Saturnia kanye nalezo zaseSan Casciano ai Bagni. Siyimizuzu eyi-10 ukusuka emithambekeni yokushushuluza ebusika enikezela ngamakheshi amabili ezihlalo kanye namakheshi ahlukahlukene. Ipulazi lizungezwe ngokuphelele uhlaza, ngamasimu, uphayini kanye nezinkuni ze-chestnut. Izinyamazane izinyamazane, izingungumbane, amambila, izingulube zasendle nezimpungushe zivame ukubonakala. Le ndawo ayikanakele lutho, isiphephelo sezinhlobo zezinyoni ezehlukene okuhlanganisa oklebe namaqili. Futhi izinkulungwane zokhanyikhanyi ezizobonwa ekushoneni kwelanga ehlobo, kanye noswebezane lezimvemvane entwasahlobo. Ilungele ukubuka izinyoni, ukuhamba ngezinyawo kanye nabathandi bamabhayisikili basezintabeni, kuyilapho kungekude ukwazi ukuzijwayeza i-paragliding. Ngenxa yendawo yayo, ilungele ukuhlela ukuvakasha kwezithombe kanye nezithombe zakho zobuciko. Izifundo ze-Yoga nazo zingahlelwa